नेपाल जिते बिश्वकप छनौटमा, हारे के हुन्छ ? – WicketNepal
नेपाल जिते बिश्वकप छनौटमा, हारे के हुन्छ ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७४ फाल्गुन २, बुधबार ११:५२
विकेटनेपाल, फाल्गुन-२ बुधबार
आईसीसी बिश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ अन्तर्गत नेपालले लिगको अन्तिम खेलमा क्यानडाको सामना गर्दैछ। यस्तै अन्य २ खेलमा नामिबियाले युएईको तथा ओमानले केन्यासंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
लिगको अंकतालिकामा क्यानडा, नामीबिया र नेपालले ४ खेल खेल्दै समान ३ जित र १ हार बेहोरेता पनि नेट रनरेटको आधारमा क्यानडा पहिलो नामिबिया दोश्रो र नेपाल तेश्रो स्थानमा रहेको छ। क्यानडाको नेट रनरेट १.११६ , नामिबियाको ०.७८७ रहेको छ भने नेपालको -०.१५८ रहेको छ। ४ खेलमा २ जित र २ हार बेहोरेको युएईको नेट रनरेट १.२२१ रहेको छ जसकारण युएईले नामिबियालाई पराजित गरेको खण्डमा युएईको टप-२ भित्र पर्ने सम्भावना धेरै छ।
यो अवस्थामा लिग चरणको अन्तिम दिन नेपालले क्यानडालाई पराजित गरेको खण्डमा मार्चमा जिम्बाबेमा आयोजना हुने २०१९ एकदिवसीय बिश्वकप छनौटमा नेपाल छानीनेछ। नेपाल क्यानडासंग हारेको खण्डमा तथा नामिबियाले युएईसंग हारेको खण्डमा भने नेट रनरेटको आधारमा नेपाल, युएई र नामिबिया मध्ये १ टिम टप-२ भित्र क्यानडासंग टप-२ हुनेछ।
नेपाल हार्दा के हुन्छ ?
कमजोर -०.१५८ नेट रनरेट रहेको नेपाल क्यानडासंग हारेको खण्डमा भने टप-२ पर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम ( असम्भव जस्तै ) छ। क्यानडासंग नेपाल हार्यो र अर्को खेलमा नामिबियाले युएईलाई जित्यो भने स्वतः क्यानडा र नामिबिया छनौट हुनेछन्। नेपाल हार्यो र युएईले नामिबियालाई जितेको खण्डमा ३ वटै टिमको ३/३ जित र २/२ हार हुनेछ जसकारण युएई, नेपाल र नामिबिया बीच नेट रनरेटमा अघि हुने टिम टप-२ मा छानिनेछ। युएई ( १.२२१ ) र नामिबिया ( ०.७८७ ) को नेट रनरेट नेपालको ( -०.१५८ ) भन्दा निकै माथि हुँदा क्यानडासंग नेपाल हारे नेपाल टप-२ भित्र पर्ने सम्भावना छैन बराबर हुन्छ।
आज नेपाल र क्यानडा बाहेक अन्य खेलमा नामिबियाले युएईको तथा केन्याले ओमानको सामना गर्दैछ। केन्या ४ वटै खेल हार्दै डिभिजन-३ मा रेलिगेट भैसकेको छ भने ओमानले केन्यालाई पराजित गरेको खण्डमा ओमान उत्कृस्ट-४ भित्र पर्न नामिबिया र युएईको नतिजामा भरपर्छ।
ओमानको खराब नेट रन रेट ( -०.६२९ ) का कारण युएईले नामिबियासंग हारेको खण्डमा र ओमानले केन्यालाई जितेको खण्डमा पनि ओमान टप-४ भित्र पर्ने सम्भावना कम छ।
आज हुने क्यानडा र नेपाल तथा नामिबिया र युएई बीचको खेल सेमीफाइनल जस्तै पनि हो। दुवै खेलमा जित हाँसिल गर्ने टिम उत्कृस्ट-२ हुने लगभग पक्का छ। स्मरण रहोस् डिभिजन-२ को उत्कृस्ट २ हुने टिम जिम्बाबेमा मार्चमा आयोजना हुने २०१९ बिश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न छानिनेछ भने तेश्रो र चौथो हुने टिम डिभिजन-२ मै रहनेछ। पाँचौ र छैठौ स्थानमा रहने टिम डिभिजन-३ मा रेलिगेट हुनेछ ( केन्या रेलीगेट भइसकेकोछ )
CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND – JANUARY 21: during the ICC Cricket World Cup Qualifier match between Canada and Nepal at Hagley Oval on January 21, 2014 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Martin Hunter-IDI/IDI via Getty Images)